HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम -
पूर्वजन्मको यादले सताएपछि…
छोराको खुशिमा रम्न नपाउंदै रबि ओडकी आमाको निधन, यस्तो थियो रविको सपना..!
को बनिन् मिस हङकङ नेपाल २०१८ ? हेर्नुहोस् पूरा भिडियो …
काठमाडौं । सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने बिषयमा प्रहरीसँग झडप हुँदा काभ्रेमा गोली चलेको छ।
काठमाडौं – सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेको दोस्रो दिनै डा. सिके राउत मधेस झरे। तर, मधेस झरेको डेढ हप्तासम्म उनी सार्वजनिक रुपमा केही बोलेका छैनन्। सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिन पनि अस्वीकार गरेका छन्। किन मौन छन् राउत?
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्त प्रकरणमा कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टको बयान सुरु भएको छ।
धनुषा – धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका– ५ मा पर्छ— शान्तिपुर गाउँ । बैंकका कर्मचारीले यो गाउँमा पाइलो टेके कि, शान्तिपुर अशान्त बन्छ । बैंकसँग ऋण लिएकाहरू भागाभाग गर्छन् । कसैले घरको ढोका थुन्छन् त कोही बस्ती छाडेर हिँड्छन्।
एचकेनेपाल डट कम संवाददाता- काठमाडौँ, ६ चैत्र। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाइँदैछ।
काठमाडौं: अमेरिकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई एक वर्ष पूरा गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दैै शुभकामना दिएको छ।
काठमाडौं – जापान, कोरियालगायतका देशमा जान सहजताका लागि भाषा पढाउने नाममा देशभरका अधिकांश शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले मनपरी शुल्क असुल्दै आएका छन्।
काभ्रे– आपराधिक क्रियाकलापपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै अन्य दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सुरक्षार्कीलाई गाउँमा प्रतिबन्ध लगाउँदै ‘लाठी लिएर लघार्ने’ उद्घोष विप्लव समूहले गरेको छ।
काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका महत्वपूर्ण निकायहरु आफूमातहत राखेर शक्ति सञ्चयतर्फ लागेका छन्।
न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – १८ मार्च , हङकङ । हङकङको सेन्ट्रल र एडमिरल स्टेशननजिक एमटीआरका दुई रेलहरु एक-अर्कासँग ठोकिएपछि सोमबारका रेल सेवा प्रभावित भएको छ।
सुरेन्द्र इङ्नाम / एचकेनेपाल डट कम – केन्ट– यूके, बाँसुरी समुह यूकेको दोश्रो भेला १७ तारिख आइतवारका दिन एम्पायर हल, अल्डरसटमा सम्पन्न भएको छ।
रोशन मेवाहाङ् /एचकेनेपाल डट कम- लण्डन, चैत ४ । नेपाली नयाँ बर्षको अवसरमा लण्डनस्थित व्रिक्सट्नमा आगामी अप्रिल १३ तारिख शनिबार साँझ नेपाली सांगीतिक कार्यक्रम ‘नेपाली म्युजिक फेस्टिवल २०१९’ धुमधामका साथ आयोजना गरिने भएको छ।
काठमाडौं, विप्लव माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द र अर्का वरिष्ठ नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई सुरक्षा निकायले आफूहरूको पहुँचभित्र नै रहेको दाबी गरेको छ।